လုပ်ငန်းသဘောဆိုင်ရာ စာရေးသားခြင်းတွင် နှစ်လုံးတွဲ ကြိယာများ အသုံးပြုပုံ - Myanmar Network
လုပ်ငန်းသဘောဆိုင်ရာ စာရေးသားခြင်းတွင် နှစ်လုံးတွဲ ကြိယာများ အသုံးပြုပုံ
Posted by Betty on October 6, 2015 at 11:44 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အလုပ်သဘောဆန်လွန်းသော ရေးသားပုံမျိုးမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန် phrasal verbs (စကားလုံးနှစ်လုံးတွဲ ကြိယာများ) အား အသုံးပြုပုံနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ် ယခင်က ရေးသားခဲ့ဖူးပါသည်။ သို့သော် သင်အနေနှင့် တကယ်ပင် လုပ်ငန်းသဘော ဆန်ဆန် စာရေးသားရန် လိုအပ်လာပြီဆိုပါက၊ ဥပမာ ပညာရှင်သဘောဆန်သည့် စာစီစာကုံးမျိုး၊ သတင်းပို့ချက်(သို့) လုပ်ငန်းသုံးစာများ ရေးသားရန် လိုအပ်လာပါက သင် မည်သို့ဆက်လုပ်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် phrasal verbs (နှစ်လုံးတွဲကြိယာများ) နှင့်အခြားသော multi - word verbs (စကားလုံးတစ်လုံးထက်ပိုပါသော ကြိယာများ) ကို အတော်ပင် လုပ်ငန်းသဘောမဆန်သော အသုံးအနှုန်းမျိုးဟု မကြာခဏ စဉ်းစားလေ့ရှိသော်လည်း ၎င်းကြိယာများ အများစုသည် အမှန်တော့ ကြားနေအဆင့်မှာပင်ရှိပြီး အလုပ်ပုံစံဆန်သည်ဟု သေချာပြောနိုင် သည့် အသုံးအနှုန်းများလည်း များစွာရှိပါတယ်။ ယခုသင်ခန်းစာတွင် လုပ်ငန်းခွင်သုံး (သို့မဟုတ်) ပညာရှင်ဆန်သည့် စာရေးသားခြင်းမျိုးတွင်လည်း လုံးဝ သင့်လျှော်သည်ဖြစ်သော နှစ်လုံးတွဲ verbs များစွာ စုစည်းပေးထားသည်ကို လေ့လာကြည့်ရှု့ကြမည် ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ လုပ်ငန်းခွင်သုံးအနေနဲ့ အသုံးပြုရန် phrasal verb ကို တစ်လုံးတည်းသာ လေ့လာချင်တယ်ဆိုလျှင်တော့ ကျွန်ုပ် ညွန်းရမှာကတော့ carry out (ပြုလုပ်သည်၊ ဆောင်ရွက်သည်) ဆိုတဲ့စကားလုံးပါဘဲ။ သူဟာ အလွန်ကိုဘဲ အသုံးများပြီးတော့ "do" (ပြုလုပ်သည်) ဆိုသောစကားလုံးထက်လည်း ပိုမို၍ ခမ်းနားကာ လူမြင်ကောင်းစေတဲ့ပုံစံမျိုး ပေါက်စေပါတယ်။
Scientists have carried out experiments/tests/research on … (သိပ္ပံပညာရှင်များက .....နှင့်ပတ်သက်၍ စမ်းသပ်လေ့လာမှုများ/ စစ်ဆေးမှုများ/သုတေသနများပြုလုပ်ခဲ့သည်။)
We have carried outathorough review of … (ကျွန်ုပ်တို့သည် ………. အား အသေးစိတ် ပြန်လည်လေ့လာခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။)
အခြားရိုးစင်းသော verbs (ကြိယာများ)သည်လည်း လုပ်ငန်းခွင်သဘော စာရေးသားခြင်းတွင် အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
The railways brought about huge change. (= caused) (မီးရထားများသည် ကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။)
The discovery came about by chance. (= happened) (ဤတွေ့ရှိ ချက်သည် တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။)
Unusually cold weather accounted for the rise in fuel use. (= explained) ပုံမှန်မဟုတ်သော ရာသီဥတုအေးမြခြင်းသည် လောင်စာဆီ အသုံးမြင့်တက်လာခြင်း၏ အကြောင်းရင်းခံပင်ဖြစ်သည်။ (...ဟူသည့် အချက်ကို ရှင်းပြပေးနေသလို ဖြစ်သည်။)
စာစီစာကုံး သို့မဟုတ် သတင်းပို့မှု တို့ကို ၎င်းတို့၏ ဦးတည်ချက်နှင့် ဘယ်လို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသလဲ စသည်တို့ကို ရှင်းပြထားသော နိဒါန်းမျိုးနှင့် စ,ရေးတတ်ကြသည်မှာ ဓမ္မတာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ
This report consists of three main parts.(ဤအစီရင်ခံစာတွင် အဓိကအစိတ် အပိုင်း(၃)ခု ပါရှိပါသည်။)
The essay focuses on Mahler’s early life and expands on/builds on previous work by … (ဤရေးသားချက်သည် မာ(ဟ)လာ၏ အစောပိုင်း ဘဝအခြေအနေပေါ် အဓိကအခြေခံထားပြီး၊ ရှေ့ပိုင်းက . . . .တို့၏ ရေးသားချက်များအပေါ် ထပ်မံချဲ့ထွင်ရေးသားထားပါသည်။)
The final section is devoted toadiscussion of … (နောက်ဆုံးကဏ္ဍကတော့ . . . အကြောင်းဆွေးနွေးမှု သီးသန့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ )
ပညာရှင်ဆန်သော ရေးသားမှုများတွင် အခြားသတင်းအရင်းအမြစ်များသို့လည်း ရည်ညွှန်းရန် များသောအားဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။
As Brown points out … (ဘရောင်းက ညွှန်ပြခဲ့သလိုဘဲ . . .)
Smith puts forward the theory that … (စမစ်ထ်က . . . .ဟူသည့် သီအိုရီယူဆချက်ကို တင်ပြပါသည်။)
Her letters allude to the fact that … (သူမ၏စာများဟာ . . . .ဆိုတဲ့အချက်ကို သွယ်ဝိုက်ရည်ညွှန်းနေပါတယ်။)
This poem was originally attributed to Shakespeare. (ဤကဗျာကို မူလ စတင်ရေးသားသူမှာ ရှိတ်စပီးယားဟု ယုံကြည်ကြပါသည်။)
သင်၏ ရေးသားချက်၏ နောက်ဆုံးကောက်ချက်ချမှုများကို အထောက်အကူပေးရန် သင့်မှာ ရှိသော အထောက်အထားများ အကြောင်း ပြောဆိုခြင်းမှာလည်း လုပ်လေ့ရှိသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
These results bear out earlier findings. (ဤ ရလာဒ်အဖြေများသည် ရှေ့ပိုင်းတွင် တွေ့ရှိထားချက်များကို မှန်ကန်ကြောင်း ပြသပါသည်။)
All the evidence points towards human error. (သက်သေ အထောက်အထားအားလုံးက လူ့ အမှားမျိုးဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေပါသည်။)
These recommendations are based on the results of extensive research. (ဤ ညွန်းထားပေးချက်များသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုသေသနပြုထားခြင်း၏ ရလာဒ်များအပေါ် အခြေခံပါသည်။)
Their team arrived at the same conclusions. (သူတို့အသင်းသည် တူညီသော ကောက်ချက်ချမှုများသို့ရောက်ရှိသွားကြပါသည်။)
သုသေသနပြုခဲ့သည့် နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြရန်လည်း သင် ဆန္ဒရှိကောင်းရှိမည်ဖြစ်သည်။
The questionnaires were followed up with interviews. (ဤစစ်တမ်းကောက်မေးခွန်း မေးထားမှုများနောက်တွင် အင်တာဗျူးများဆက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။)
We had to factor in the effect of other treatments. (အခြားကုသနည်းများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့က ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။)
Eventually, the age range was narrowed down. (နောက်ဆုံးတွင် အသက်အပိုင်းအခြားသတ်မှတ်ချက်ကို ချုံ့ပေးလိုက်ပါသည်။)
All the experiments were subjected to strict controls. (စမ်းသပ်လေ့လာမှုအားလုံးကို တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။)
The team was then able to dispense with paper records. (အသင်းသည် ၎င်း နောက်ပိုင်းတွင် စက္ကူမှတ်တမ်းများကို လက်လွှတ်လိုက်၍ ရလာပါသည်။)
The new procedures were phased in gradually. (ဆောင်ရွက်ပုံ ဆောင်ရွက်နည်းအသစ်များကို တဖြည်းဖြည်းနှင့် တစ်ဆင့်ချင်း ပြုလုပ်လာပါသည်။)
ထို့ကြောင့် အားလုံး ကို ခြုံငုံ၍ပြောရလျှင် လုပ်ငန်းသဘော စာရေးသားမှုများတွင် phrasal verbs (နှစ်လုံးတွဲ verbs)များကို လုံးဝမသုံးဘဲ ချန်မထားပါနှင့်။ ယုံကြည်လေးစားမှုရှိစေသည့် စာရေးသားပုံမျိုးအတွက် အကျိုးပြုနိုင်သလို၊ သင်၏ စာဖတ်ပရိသတ် များထံမှ လေးစားအထင်ကြီးမှုရလာဒ်ကို ရရှိစေသည့်စကားလုံးမျိုးများစွာ ရှိနေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
Dictionaryblog.cambridge.org မှ Liz Walter​ ၏ They carried out an experiment: phrasal verbs in formal writing ကို ကိုးကာဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by Aung Win Naing on October 7, 2015 at 19:33
Really noteworthy. Thanks.It is advisable to post more lessons like this.
Permalink Reply by Maymi Kolin on October 11, 2015 at 14:07
It effect on my working environment. Thank you. Please, post preposition that using the wrong preposition, especially, common mistake.
Permalink Reply by Aye Aye Khaing on October 13, 2015 at 11:47
Permalink Reply by swesweko on October 20, 2015 at 8:42
Permalink Reply by Zar Ma Ni on April 25, 2016 at 10:13